उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस्
OMR सफ्टवेयर मुक्त - स्क्यान उत्तर पुस्तिका, बहु विकल्प उत्तर पाना
फोटोहरू अपलोड गरी OMR पानाहरू स्क्यान गर्नुहोस् वा भरिएका OMR फारमहरूको स्क्यान गर्नुहोस्। प्रयोग गरिएको प्रश्नहरूको संख्या चयन गर्नुहोस् उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् अनुप्रयोग
ड्रप वा तपाईंको फाईल अपलोड गर्नुहोस्
क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्नुहोस्
खराब मान्यता गुणस्तर
उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् ग्रेड क्यालकुलेटर
Aspose.OMR स्क्यान उत्तर पाना एक नि: शुल्क अनलाइन अनुप्रयोग हो जसले स्क्यान गर्ने उत्तर पाना फारामहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन उत्तर पाना सिर्जना गर्नुहोस् अनुप्रयोग। तपाईंको OMR पानाको तस्विर वा स्क्यान अपलोड गर्नुहोस्, पृष्ठमा प्रश्नहरूको मात्रा चयन गर्नुहोस् र यो उच्च परिशुद्धताका साथ पहिचान हुनेछ। मान्यता परिणामहरू प्रतिलिपि गर्न वा लोकप्रिय ढाँचामा बचत गर्न सकिन्छ: CSV, JSON। स्क्यान उत्तर पानाले कुनै पनि उपकरण र प्लेटफर्ममा काम गर्दछ र कुनै अतिरिक्त आवश्यकताहरू छैनन्।
यस चरणमा तपाईं प्रिन्ट भइसक्नु भएको छ र भर्खरको जवाफहरू भर्खरै पछिल्लो चरण मा सिर्जना गरिएको छ हाम्रो नि: शुल्क Aspose.OMR मा उत्तर पुस्तिका बनाउनुहोस्। अब यो नि: शुल्क अनुप्रयोगको साथ फारमहरू प्रक्रिया गर्ने समय भएको छ। Aspose.OMR स्क्यान उत्तर पुस्तिका बुलबुले भरिएको मानव त्रुटि को लागी imprecisely - जबसम्म तिनीहरू अन्य बुलबुले भड्किदैनन् र बबल लगभग भरिन्छ, स्क्यानरले भरिएको रूपमा यसलाई पत्ता लगाउँदछ। अप्टिकल मार्क मान्यता एक समय बचत प्रक्रिया हो र डाटा सटीक स collecting्कलन गर्न अनुमति दिन्छ।
कसरी उत्तर पाना स्क्यान गर्ने
फाइल ड्रप क्षेत्र भित्र क्लिक गर्नुहोस् वा तस्विर अपलोड गर्न ड्र्याग र ड्रप प्रयोग गर्नुहोस् वा भरिएको उत्तर पानाको स्क्यान गर्नुहोस्।
पृष्ठमा प्रश्नहरूको संख्या चयन गर्नुहोस्।
मान्यता परिणामहरूको आउटपुट स्वरूप छनौट गर्नुहोस्।
मान्यता प्रक्रिया सुरू गर्न "स्क्यान उत्तर पाना" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
मान्यता परिणामहरू डाउनलोड गर्न "डाउनलोड" बटन क्लिक गर्नुहोस् वा क्लिपबोर्डमा केवल प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
Aspose.OMR स्क्यान उत्तर पुस्तिका
OMR उत्तर पुस्तिका अनलाइन स्क्यान गर्नुहोस् र विश्वास योग्य ढाँचामा मान्यता परिणामहरू प्राप्त गर्नुहोस्
उत्तर पाना स्क्यान गर्नुहोस् जुन OMR बनाउनुहोस् जवाफ पाना नि: शुल्क अनुप्रयोग प्रयोग गरी सिर्जना गरिएको हो
परिणाम क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न सकिन्छ वा छानिएको ढाँचामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ
O OMR छवि कसरी स्क्यान गर्ने?
पहिले तपाईले रूपान्तरणका लागि फाइल थप्नु पर्छ: तान्नुहोस् र ड्रप फोटो वा भरिएको OMR फारमको स्क्यान वा सेतो क्षेत्र भित्र क्लिक गर्नुहोस् र फाइल छनौट गर्नुहोस्। त्यसपछि "स्क्यान" बटन क्लिक गर्नुहोस्। जब मान्यता पूर्ण हुन्छ, तपाईं प्रतिलिपि वा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको मान्यता परिणामहरू।
O OMR छविहरू स्क्यान गर्दैछ?
O OMR छविहरू स्क्यान गर्न कति समय लाग्छ?
OMR स्क्यानर छिटो काम गर्दछ। तपाईं केहि सेकेन्डमा छवि स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ।
I के म लिनक्स, म्याक ओएस वा एन्ड्रोइडमा ओएमआर छविहरू स्क्यान गर्न सक्छु?
OMR स्क्यानर अनलाइन काम गर्दछ र कुनै सफ्टवेयर स्थापनाको आवश्यक पर्दैन।
छिटो र सजिलो स्क्यान
तपाईंको छवि अपलोड गर्नुहोस्, उचित सेटिंग्स छनौट गर्नुहोस् र "स्क्यान" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईंले ओएमआर छवि पुन: मिलाउनको साथसाथ चयन ढाँचामा मान्यता परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ.
जहाँसुकैबाट पनि स्क्यान गर्नुहोस्
गुणवत्ता पहिचान गर्नुहोस्